izifo Archives - US Right to Know
Posted on August 11, 2020 by UCarey Gillam
Ucwaningo olusha kushicilelwe ngoLwesibili ithole ukuthi ngemuva kokushintshela ekudleni okungokwemvelo izinsuku ezimbalwa nje, abantu bangehlisa amazinga e-pesticides exhumene nomdlavuza otholakala emchameni wabo ngamaphesenti angaphezu kwama-70.
Abaphenyi baqoqa amasampula womchamo ayi-158 emindenini emine - abantu abadala abayisikhombisa nezingane eziyisishiyagalolunye - base behlola amasampula okuba khona kwe-weed killer glyphosate, okuyisithako esisebenzayo ku-Roundup nakwamanye ama-herbicides athandwayo. Ababambiqhaza bachitha izinsuku ezinhlanu ekudleni okungekhona okwemvelo ngokuphelele nezinsuku ezinhlanu ekudleni okuphelele ngokuphelele.
"Lolu cwaningo lukhombisa ukuthi ukushintshela ekudleni okuphilayo kuyindlela ephumelelayo yokunciphisa umthwalo womzimba we-glyphosate ... Lolu cwaningo lunezela enqwelweni yezincwadi ekhulayo ekhombisa ukuthi ukudla okune-organic kunganciphisa ukuvezwa kohlu lwezinambuzane ezinganeni nakubantu abadala," kusho isifundo, esashicilelwa ephephabhukwini Ucwaningo Lwemvelo.
Ngokuphawulekile, abacwaningi bathole ukuthi izingane ezisocwaningweni zazinamazinga aphezulu kakhulu e-glyphosate emchameni wazo kunabantu abadala. Bobabili abadala nezingane babone amaconsi amakhulu phambi kwe-pesticide kulandela ukuguqulwa kokudla. Amazinga we-urinary glyphosate azo zonke izifundo ehle ngamaphesenti angama-70.93.
Yize lincane kangako, lolu cwaningo lubalulekile ngoba lukhombisa ukuthi abantu banganciphisa ngokuphawulekayo ukuvezwa kwabo emithini yokubulala izinambuzane ekudleni ngisho nangaphandle komthetho, kusho uBruce Lanphear, uSolwazi Wezempilo eSimon Fraser University.
ULanphear uqaphele ukuthi lolu cwaningo lukhombisa ukuthi izingane zibonakala zivezwe kakhulu kunabantu abadala, yize isizathu singacaci. "Uma ukudla kungcoliswe yimithi yokubulala izinambuzane, bazoba nomthwalo omkhulu womzimba," kusho uLanphear.
I-Roundup namanye ama-herbicides e-glyphosate ajwayele ukufuthwa ngqo ngaphezulu kwezinsimu ezikhulayo zommbila, ubhontshisi, isithombo sebhitrudi, i-canola, ukolweni, i-oats nezinye izitshalo eziningi ezisetshenziselwa ukwenza ukudla, kushiya imikhondo emikhiqizweni yokudla eseqedile edliwe ngabantu nezilwane.
Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa kuthole i-glyphosate ngisho ku-oatmeal futhi sithandwa, phakathi kweminye imikhiqizo. Futhi amaqembu abathengi anemibhalo yezinsalela ze-glyphosate kuhlu lokudla okulula namabele.
Kodwa i-glyphosate ne-glyphosate-based herbicides efana ne-Roundup ixhunyaniswe nomdlavuza nokunye ukugula nezifo ezifundweni eziningana kule minyaka edlule nokuqwashisa ngocwaningo kuholele ekukhuleni kokwesaba mayelana nokuchayeka ku-pesticide ngokudla.
Amaqembu amaningi aqophe ubukhona be-glyphosate emchameni womuntu eminyakeni yamuva. Kepha kube nezifundo ezimbalwa eziqhathanisa amazinga e-glyphosate kubantu abadla ukudla okujwayelekile kuqhathaniswa nokudla okwenziwe kuphela ngokudla okulinywe ngokwemvelo, ngaphandle kokusebenzisa imishanguzo yokubulala izinambuzane efana ne-glyphosate.
"Imiphumela yalolu cwaningo iqinisekisa ucwaningo lwangaphambilini lapho izidlo eziphilayo zinganciphisa ukutholakala kwama-agrochemicals, njenge-glyphosate," kusho uChensheng Lu, uprofesa ohlanganyele we-University of Washington School of Public Health kanye noprofesa ohloniphekile, iSouthwest University, iChongqing China .
“Ngokubona kwami, umyalezo oyisisekelo waleli phepha ukukhuthaza ukukhiqiza ukudla okungokwemvelo okuningi kwabantu abafuna ukuzivikela ekuvezweni yimishanguzo yezolimo. Leli phepha liyifakazile futhi le ndlela efanelekile yokuvikela nokuvikela, ”kusho uLu.
Isifundo yabhalwa nguJohn Fagan noLarry Bohlen, bobabili be-Health Research Institute e-Iowa, kanye noSharyle Patton, umqondisi weCommonweal Biomonitoring Resource Center eCalifornia noKendra Klein, ongusosayensi osebenza kwaFriends of the Earth, iqembu elimele abathengi.
The imindeni ebambe iqhaza esifundweni uhlala e-Oakland, California, Minneapolis, Minnesota, Baltimore, Maryland nase-Atlanta, Georgia.
Ucwaningo olwesibili lwephrojekthi yocwaningo olunezingxenye ezimbili. Eyokuqala, amazinga wezibulala-zinambuzane ezihlukene eziyi-14 alinganiswa emchameni wabahlanganyeli.
IGlyphosate ikhathaza ngokukhethekile ngoba iyona herbicide esetshenziswa kakhulu emhlabeni futhi ifuthwa ngezilimo eziningi zokudla. I-International Agency for Research on Cancer, eyingxenye yeWorld Health Organisation, ithe ngonyaka wezi-2015 lokho kucwaninga kukhombise i-glyphosate ku ube yi-carcinogen yabantu.
Amashumi ezinkulungwane zabantu afake isimangalo eMonsanto esithi ukutholakala kwe-Roundup kubangele ukuthi bahlakulele i-non-Hodgkin lymphoma, futhi amazwe amaningi nezindawo emhlabeni wonke muva nje kukhawulele noma kwavimbela ama-glyphosate herbicides noma bacabanga ukwenza kanjalo.
IBayer, eyathenga iMonsanto e2018, iyi- ukuzama ukuxazulula ezingaphezu kuka-100,000 XNUMX zezimangalo ezinjalo zilethwe e-United States. Abamangali ecaleni lamacala ezweni lonke bathi iMonsanto sekuyisikhathi eside ifuna ukufihla izingozi zemithi yokubulala ukhula.
Ukudla Okucatshangwayo Bayer, umdlavuza, okusanhlamvu, I-Commonweal, Ukudla, izifo, imvelo, ukulima, Ukudla, Abangane bomhlaba, glyphosate, zezempilo, Isikhungo Sezocwaningo Lwezempilo, Uju, Monsanto, izibulala-zinambuzane, izinsalela, RoundUp, ukudla okulula, umchamo
Ijaji laseSt. Louis Liphika Isicelo SikaMonsanto Sokubambezela Olunye Uvivinyo Lomdlavuza Olwahlanganayo
Posted on August 13, 2019 by UCarey Gillam
Isifiso sikaMonsanto sokuhlehlisa olunye uvivinyo oluzayo lomdlavuza weRoundup eSt. Louis sehlulekile - okungenani okwamanje - njengejaji uyalile ukuthi ukuqulwa kwecala elibekelwe u-Okthoba kuzoqhubeka.
Ngemuva kokuzwa impikiswano kaMonsanto ngesonto eledlule efuna ukuqhubeka ecaleni likaWalter Winston v. Monsanto, iJaji leNkantolo Yesifunda saseSt. Louis uMichael Mullen wasiphika isicelo sikaMonsanto wathi icala lizoqala ngo-Okthoba 15. IJaji uMullen lathi ukufakwa nokutholwa kuleli cala kufanele iqhubeke kuze kube nguSepthemba 16 ngenqubo yokukhetha amajaji ezoqala ngo-Okthoba 10.
Ukuqulwa kwecala, uma kwenzeka, kuzobe kungokwesine uMonsanto kufanele abhekane neziguli ezinomdlavuza enkantolo ukuphendula izinsolo zokuthi imikhiqizo yayo yokubulala ukhula iRoundup ibanga i-non-Hodgkin lymphoma nokuthi inkampani ifune ukufihla imininingwane ngobungozi. IMonsanto ilahlekelwe yizilingo ezintathu zokuqala namajaji anikeze ngaphezu kuka- $ 2 billion kumonakalo, yize umklomelo ngamunye wamajaji amathathu wehlisiwe ngamajaji okuqulwa kwamacala.
Icala likaWinston lizoba futhi icala lokuqala ukwenzeka edolobheni lakudala laseMonsanto eSt. Ngaphambi kokuthengisa enkampanini yaseJalimane iBayer AG ngonyaka odlule, uMonsanto wayengomunye wabaqashi abakhulu baseSt.
Icala ebelilindeleke ukuba liqale eSt. Louis ngo-Agasti 19 labanjezelwa ngumyalelo wenkantolo ngesonto eledlule, kanti necala ebelizoqala ukuqulwa ngoSepthemba nalo liyaqhubeka.
Ngemuva kokumenyezelwa kokuqhubeka kwecala ngesonto eledlule, imithombo ithe inkampani nabameli babamangali babengena ezingxoxweni ezibucayi mayelana ukukhokhelwa komhlaba wonke okungahle kwenzeke. Njengamanje, abantu abangaphezu kwe-18,000 bamangalela iMonsanto, bonke bethi bakhulisa i-non-Hodgkin lymphoma ngenxa yokuchayeka kweRoundup kanti iMonsanto ifihle ubufakazi bengozi. Othile entanta ngamanga umnikelo wokukhokhelwa ongaba ngu- $ 8 billion, okwenza amasheya eBayer akhule kakhulu.
UBayer ubelokhu ebhekene nentengo yamasheya ecindezelekile nabatshalizimali abanganelisekanga selokhu kwathathwa isinqumo se-Aug. 10, 2018 ecaleni lokuqala lomdlavuza weRoundup. Ijaji linikeze umgcini wezinkundla zaseCalifornia UDewayne “Lee” Johnson $ 289 million futhi bathola ukuthi iMonsanto yenze ngobubi ekucindezeleni ulwazi mayelana nezingozi zemithi yokubulala ukhula.
Monsanto wadlulisa isinqumo Ezinkantolo Zokudlulisa Amacala eCalifornia, kanti uJohnson udlulise isicelo wafuna ukubuyisa umklomelo wakhe oyizigidi ezingama- $ 289 kusuka kumklomelo owehlisiwe ka- $ 78 million owabekwa yijaji lecala. Leso sikhalo kuyaqhubeka nezimpikiswano zomlomo kulindeleke ngoSepthemba noma ngo-Okthoba.
Ngokuqondene nesimo saseSt. Louis, icala likaWinston lalisengaphanjukiswa. Leli cala linabamangali abaningi, kufaka phakathi abanye abavela ngaphandle kwendawo, futhi lelo qiniso lingabeka leli cala ezinhlokweni zombono okhishwe ekuqaleni konyaka yiNkantolo Ephakeme yaseMissouri, okungenzeka ukuthi ibophele leli cala likaWinston unomphela, ngokusho kwezingqapheli zomthetho .
I-EPA kaTrump "Inemuva leMonsanto"
Ezindabeni ezihlukile, i-Environmental Protection Agency (EPA) ngesonto eledlule yakhipha isitatimende sephephandaba ukumemezela ukuthi ngeke kuvume amalebula okuxwayisa ngomdlavuza adingwa izwe laseCalifornia ngemikhiqizo ethile ye-herbicide esekwe ku-glyphosate. I-EPA ithe ilebula ethi i-glyphosate "yaziwa ngokubanga umdlavuza," ingamanga futhi ayikho emthethweni, futhi ngeke ivunyelwe yize isenzo somthetho saseCalifornia siyala ilebuli enjalo.
“Kuwukungakhathali ukufuna amalebuli emikhiqizweni engelona iqiniso uma i-EPA yazi ukuthi umkhiqizo awubeki ingozi yomdlavuza. Ngeke sivumele uhlelo olunamaphutha lwaseCalifornia ukuthi lucindezele inqubomgomo yenhlangano, ”kusho uMphathi we-EPA u-Andrew Wheeler.
Uhlu lwaseCalifornia lwe-glyphosate njengento eyaziwa ngokudala umdlavuza lwenzeka ngemuva kokuthi i-World Health Organisation's International Agency on the Research for Cancer (IARC) ihlukanise i-glyphosate ngonyaka ka-2015 ngokuthi “mhlawumbe ibanga umdlavuza kubantu.”
Iqiniso lokuthi i-EPA ithatha lesi simo, futhi yabona kunesidingo sokuthi ikhiphe abezindaba, kubonakala kuqinisekisa imibhalo yangaphakathi yeMonsanto etholwe ngokutholakala kwamacala abonisa ukuthi i-EPA kukholakala ukuthi "Unomhlane kaMonsanto”Uma kukhulunywa nge-glyphosate.
Phakathi ku umbiko inamathiselwe ku-imeyili kaJulayi 2018 kumphathi wamasu omhlaba wonke weMonsanto uTodd Rands, inkampani yezobunhloli nezeluleko I-Hakluyt ibike kuMonsanto okulandelayo:
"Umeluleki wezinqubomgomo zasekhaya e-White House uthe, ngokwesibonelo: 'Sinomlando kaMonsanto emthethweni wokulawulwa kwezibulala-zinambuzane. Sikulungele ukuhamba ngezwane kunoma yiziphi izingxabano abangaba nazo, isibonelo, i-EU. IMonsanto akudingeki yesabe noma imuphi umthethonqubo owengeziwe ovela kulo mbuso. ”
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umdlavuza, izifo, EPA, Ukudla, Monsanto, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, Isivivinyo